के तपाईको म्यासेन्जरमा ‘यो तिमी हो?’ भन्ने म्यासेज आयो ? त्यो एउटा भाईरस पनि हुन सक्छ | Yangwarak Focus
Home प्रविधि के तपाईको म्यासेन्जरमा ‘यो तिमी हो?’ भन्ने म्यासेज आयो ? त्यो एउटा...
के तपाईको म्यासेन्जरमा ‘यो तिमी हो?’ भन्ने म्यासेज आयो ? त्यो एउटा भाईरस पनि हुन सक्छ
९ पुष २०७७, बिहीबार १४:२४
पुस-९, डेस्क । के तपाईको म्यासेन्जरमा एउटा धमिलो भिडियोको थम्बनेलमा ‘यो तिमी हो ?’ भनेर म्यासेज आएको छ ?यदि हो भने त्यस्लाई नखोल्नुहोस् । अहिले हामीमध्ये धेरैले आफ्नो साथीभाईबाट म्यासेन्जरमा यस्तो म्यासेज आइरहेको देख्न सक्छौं । यस्तो म्यासेज आएपछि कतिपयले क्लिक गरेर पढ्ने वा हेर्ने कोसिस गरिन्छ ।
सो म्यासेन्जरमा आएको भिडियोमा एउटा युआरएल लिङ्क रहेको छ । त्यसमा क्लिक गर्दा एउटा फेसबुक लग इन पेज जस्तो बक्स पप अप हुन्छ । तर वास्तवमा यो कुनै फेसबुकको लग इन पेज होइन । फेसबुकसँग असम्बद्ध यो एउटा हङ्गेरियन वेब होस्टिङ प्लेटफर्मको एकाएक सिर्जना भएको सर्भर नाम हो । यस्ता साइटले एचटीटीपीएसको सट्टा एचटीटीपी प्रयोग गरिएका हुन्छन् । फेसबुकले सुरुवातदेखि नै सबै कुरामा एचटीटीपीएस प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले २०१२ मा नै एचटीटीपीलाई प्रयोग गर्न छाडेको हो । यसैले यदि कुनै पनि पेजले आफूलाई फेसबुक प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छ तर उसको एड्रेस बारमा एचटीटीपी मात्र छ भने थाहा पाउनुहोस् त्यो सबै फर्जी हो । यदि तपाईले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड फर्जी लग इन पेजमा राख्नुभयो भने त्यो सबै संवेदनशील जानकारी अमेरिकामा कतै न्युन शूल्कमा होस्ट भइरहेको सर्भरमा पुग्नेछ ।
यस किसिमका स्पामहरुबाट बच्न सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो अकाउन्टमा टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन र पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै बिल्ट इन भाइरसको प्रयोगले पनि यस्तो समस्या रोक्न सक्छ । यदि तपाईको साथीको अकाउन्ट ह्याक भयो भने उनीहरुलाई अन्य कुनै तरिकाबाट सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाईको साथीले तपाईको अकाउन्ट ह्याक भएको जानकारी दियो भने ढिला नगरी आफ्नो अकाउन्ट रिकोभरीको विधि अपनाउनुहोस् ।
Previous articleपाँचथरमा नेकपा र काङ्ग्रेस परित्याग गरि जसपा प्रवेश
Next articleधनकुटामा बसको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको ज्यान गयो
सुमन सहयात्री - ९ पुष २०७७, बिहीबार १४:२४
याङ्वरक फोकस - ९ पुष २०७७, बिहीबार १४:२४